प्राडा विजय केसी | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय प्राडा विजय केसी
प्राडा विजय केसी
साउथ एशियन इन्षिटच्युट अफ म्यानेजमेण्ट (साइम) का डीन प्राडा विजय केसी २००६ सालमा काठमाडौंमा जन्मेका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमकम र ‘टेम्पल युनिभसिटी’ अमेरिकाबाट एमबीए गरेका छन् । दिल्ली विश्वविद्यालय भारतबाट विद्यावारिधि गरेका उनीसँग ४० वर्षको अध्यापन अनुभव छ । उनले त्रिविको व्यवस्थापन विभागमा करीब २३ वर्षअध्यापन गरेका थिए । त्यसैगरी उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ म्यानेजमेण्टमा डीनका रूपमा करीब १२ वर्षसेवा गरे । कृषि विकास बैङ्कको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी अनुसन्धाता र परामर्शदाताका रूपमा अहिले पनि क्रियाशील छन् । उनी बेलायतको ‘ल्यानक्याष्टर युनिभसिर्टीका अतिथि प्राध्यापक पनि हुन् ।
बिग्रँदो औद्योगिक वातावरण
झण्डै डेढ महीनाअघि दैनिक पत्रिकामा एक जना मित्रको निधनको समवेदना पढें । अल्प आयुमै निधन भएकोमा बडो दु:ख लाग्यो । त्यो भन्दा दु:ख त त्यसबेला लाग्यो जब मैले निजको निधन कालगतिले नभई आत्महत्याबाट भएको थाहा पाएँ । आत्महत्याको कारण व्यापारमा भएको निरन्तर सङ्कुचन, नोक्सानी र बढ्दो ऋणको भार रहेछ । गतवर्ष वीरगञ्जमा प्लाष्टिकका भाँडा बनाउने एक कम्पनीका मालिकले लोडशेडिङका कारण एसबीआई बैङ्कको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना सम्झना दिलायो । आत्महत्याका यस्ता घटनाले अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायीहरुलाई आफ्नो काम गर्न कति कष्टकर र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।
विगत केही वर्षदेखि देशको आर्थिक अवस्था निकै निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । लामो समयदेखि लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । ‘पर्ख र हेर’को नीति लिइरहेका लगानीकर्ताहरु आजित भई लगानी गरिरहेका छन् । अहिले लगानीको वातावरण ज्यादै धमिलिँदै गएको छ । विगत ९ वर्षको अवधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वृद्धि भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर यस समयमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । गतवर्षमा यसको वृद्धिदर ऋणात्मक नै थियो । यसैगरी, यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गतवर्ष यसको वृद्धिदर १ प्रतिशतमात्र थियो । ९ वर्षको अवधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशतको आसपास रहयो । कुल पूँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत रहन पुग्यो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । समष्टिगत रुपमा हेर्दा विगत ९ वर्षको तथ्याङ्कले नेपाल मुख्यतया उत्पादन र पूँजी निर्माण गर्ने क्षमताभन्दा बढी उपभोग गर्ने देशका रुपमा देखा परेको छ । यस अवधिमा यदि विप्रेषण आप्रवाह नहुँदो हो त देशको अर्थिक अवस्था निकै नै नाजुक हुने थियो ।
१० प्रतिशतभन्दा माथिको महँगाइ र समय-समयमा आपूर्तिमा हुने अवरोधले सर्वसाधारणको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । व्यवसायीहरुलाई काम गर्न कठिन छ । विद्युत् आपूर्तिमा भएको कमीले उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ । उद्योगहरु आफ्नो उत्पादन क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन भइरहेकाले लागत बढ्न गएको छ । समय-समयमा हुने श्रमिकसम्बन्धी समस्याले उद्योगधन्दा सञ्चालनमा अनिश्चितता बढ्न गई उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको छ । उद्योगपति र मजदूरबीचको विवाद र झगडा बढ्नाले नयाँ लगानीकर्ताहरु हतोत्साही भएका छन् । बढ्दो ब्याजको भारले ऋणीहरुलाई समयमा ऋण चुक्ता गर्न निकै कठिनाइ भएको छ । बजारमा पूँजीको अभावका कारण आवश्यक परेका बेलामा ऋण उपलब्ध हुन नसक्नाले व्यवसायीहरु आफ्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । बारम्बार हुने बन्दहडतालले आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न गराउनुका साथै उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन कठिन भएको छ । रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशिने क्रम बढेपछि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ । स्पष्ट छ, अहिले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण निकै असजिलो भएको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि हुने अवरोध विभिन्न हुन्छन् । तथापि समष्टिगत रुपमा तिनीहरुलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ: १. प्राथमिक अवरोध २. मानव सृजित अवरोध । प्राकृतिक स्रोतसाधनमा कमी, भौगोलिक बनोट, विषम हावापानीजस्ता अवरोध प्राथमिकमा पर्छन् । भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी, राजनीतिक अस्थिरता , अफ्ठ्यारो कर्मचारीतन्त्र, कामप्रतिको मूल्यमान्यता र संस्कृति मानव सृजित अवरोध हुन् । नेपालको विकासमा देखिएका अवरोध मुख्यगरी मानव सृजित अवरोध नै हुन् । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलका अनुसार नेपाल २०६१ देखि २०६७ सालको अवधिमा भ्रष्टाचार परिसूचकमा ९औं स्थानबाट झरेर १४३औं स्थानमा पुगेको छ । जबकि सोही अवधिमा बङ्गलादेश १४५औं स्थानबाट १३९औं र इण्डोनेशिया १३३ स्थानबाट १११औं स्थानमा उक्लेको छ । त्यस्तै ‘डुइङ बिजनेश २०११’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ‘व्यवसाय गर्न सहज’ परिसूचकमा ११६औं स्थानमा रहेको छ । जबकि बङ्गलादेशको स्थान १०७, श्रीलङ्काको १०२ र पाकिस्तानको स्थान ८३ मा छ । यस परिसूचकमा कर तिर्ने प्रावधानमा नेपालको स्थान १२३, निर्माण स्वीकृति लिने सम्बन्धमा १३० र सीमापारी व्यापार सरलीकरणमा १६४औं स्थानमा रहेको छ । नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण निराशाजनक छ र यसको प्रमुख कारण मानव सृजित नै हो । नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा यसको प्रभाव परेको विगतको दशकमा विभिन्न परिसूचकहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
यस्तो निराशाजनक परिस्थितिमा पनि केही व्यवसायीहरुले उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाएका छन् । यसका लागि निश्चय पनि व्यवसायीहरुको जाँगर, चुनौती लिने क्षमता र व्यवस्थापन कौशलताको प्रशंसा गर्नैपर्छ । नेपालको अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा केही व्यवसायीहरुले अनुचित फाइदा लिने प्रयास नगरेका होइनन् । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, कर छलीदेखि लिएर सर्वसाधरणको जीवनमा असर पर्ने खालका मिसावटजन्य क्रियाकलाप जस्तै: खाद्य तथा पेय पदार्थ, जोखिमयुक्त ग्यास सिलिण्डरको कार्य गरेका छन् । सर्वसाधारणसँग रकम लिएर विदेश पलायन हुनेहरु पनि कम छैनन् । तथापि देशको अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायीहरुले समष्टिगत रुपमा जुन जाँगर र अभिरुचि देखाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान तथा जीवित राखेका छन् यसको कदर गर्नैपर्छ । अस्थिर राजनीति, नीतिगत कमजोरी र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि प्राथमिकता दिन सरकारको पहल नहुनु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु आफ्नै दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिनु नै आजको प्रमुख समस्या हो । आशा गरौं, यसबारे सरकार तथा नेताहरुले गम्भीर ध्यान दिनेछन् । र, भविष्यमा काम गर्न कठिन भएर कोही पनि व्यवसायीले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आउने छैन ।